Zvakanakira kuverenga bhuku zvinopa kuvana nevakuru | Zvazvino Zvinyorwa
Ndeapi mabhenefiti ekuverenga kwevana nevakuru
Encarni Arcoya | | Literature
Ona a kuverenga kwemwana Nhasi zvinoita sekunge isu chifananidzo chakakodzera kutora pikicha. Uye ndezvekuti, vazhinji uye vazhinji ndeavo vanoramba bhuku, kana avo vanongoverenga izvo zvinomanikidzwa muzvikoro nemasangano (uye kunyangwe mune iwo nguva ivo vanoedza kusarudza akanakisa). Kurudzira kuverenga yevana haisi nyaya yekuvamanikidza chete kuverenga, asi yekuwana hunyanzvi hukuru hunozivikanwa nevaverengi chete.
Kazhinji nguva, bhuku rinongoonekwa senge seti yemapeji anotaurira nyaya, zvakanyanya kana kushomeka kukosha, asi zvishoma zvimwe. Asi chokwadi ndechekuti kuverenga kunounza nezvakawanda zvakanaka Chii chinofanirwa kuzivikanwa kuti unzwisise nei zvichikosha kukurudzira kuverenga muvana.
1 Iwo mabhenefiti makuru ekuverenga bhuku
1.1 Pfumisa mazwi
1.2 Kuvandudza kutarisisa
1.3 Kudzidzira ndangariro nebhuku
1.4 Dzidza kunyora
Iwo mabhenefiti makuru ekuverenga bhuku
La kuverenga bhuku hazviite chete kuti iwe uzive isinganzwisisike nyaya iyo mumwe munhu akagadzira pasina chinhu. Chaizvoizvo, mabhuku anodzidzisa zvakawanda. Uye humbowo ndewekuti iwe unogona kuwana zvimwe zvakanaka kubva pakuverenga, senge zvinotevera
ChiSpanish chine mazwi anoda kusvika zviuru zana, asi hapana anoziva chaizvo ese. Zvisinei, vadiki vanoshandisa chete 25% yemashoko iwayo, nepo munhu wepakati nepakati angagona kuziva pakati pe500 ne1000. Munyori wepakati, anokwanisa kusvika 3000. Asi, ko zvakadiniko?
Ichokwadi kuti mabhuku anenge asina mazwi zviuru zana, asi achabatsira kuwedzera mazwi kubva pazera diki, uye izvo zvichavaita kuti vazive nzira yekuzviratidza nayo zvakakwana mumamiriro akasiyana.
Kana uchiverenga, kutarisisa kunofanirwa kuve kwakatariswa pabhuku uye pane tsamba nemazwi auri kupfuura. Nekuteerera nekutarisa uchiverenga, iwe unobatsira pfungwa dzako kuziva tarisa uye teerera kune chauinacho muruoko.
Y anofarira kunzwisisa.
Kana mwana akatarisa pane zvaanoverenga, zvinofungidzirwa kuti, kana iwe ukamubvunza izvo zvaakaverenga, iye achaziva mapinduriro ako nenzira kwayo. Zvinyorwa zvinyorwa, izvo zvawaifanira kugadzira pawaive mudiki uchiverenga bhuku, izvozvi zvakanganwika.
Uye zvakadaro, ivo vaikosha nekuti ivo vakaita kuti iwe utarise kune izvo zvinyorwa zvawanga uchiverenga uye kuzviisa mupfungwa dzako kuti iwe ugone ita pfupiso yekuverenga ikoko.
Kudzidzira ndangariro nebhuku
Kune zvidzidzo zvinotsigira kuti, kana ndangariro ikasashandiswa, yakarasika. Mazuva ano, kurangarira chimwe chinhu chakareruka senge nhamba yefoni yeshamwari dzako, kana kero yekumba yehama dzako dzimwe nguva inova isingafungiki, kunyanya kuve nenharembozha iri padyo panochengeterwa zvese uye hapana chikonzero chekuziva nemusoro.
Kune rimwe divi, kana iwe wapedza kuverenga bhuku, zvakajairika chinhu ndechekuti iwe unorangarira iyo nyaya, pamwe kwete ese, asi zvinhu zvakawanda. Uye izvo, mukufamba kwenguva, inobatsira iyo mhasuru uye mauroni kuti asarasika.
Inogona kutaridza kunge yakapusa, asi haisi. Kuverenga kunobatsira kuwedzera mazwi, asi zvakare izvo, panguva yekunyora, unopa misspell kuverenga izvo zvakazvipira, nekuti zvinoita sekunge alarm yakarira mumusoro ichitiudza kuti pane chakashata neshoko.
Pakutanga izvo zvinogona kusazoitika, asi nekufamba kwenguva (uye kuverenga kwemamwe mabhuku), chero bedzi paine kutarisisa pakuverenga, zvinokwanisika kunyora pasina zvikanganiso, chimwe chinhu icho nhasi chinozivikanwa kuti vana vanokombamira vachizviita.
Kuverenga bhuku kunogona kufinha kana iwe usingade iyo nyaya, iyo yemhando yemhando, kana munyori. Asi munhu wega wega ane chakakosha, iyo ndiyo iyo inofarira kuverenga. Uye kubva paudiki, iwe unofanirwa kuyedza kutsvaga iro rakanakira bhuku kuti uwane mabhenefiti ayo anogona nyore kuverengwa nekuverenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Ndeapi mabhenefiti ekuverenga kwevana nevakuru
Ongororo pfupi yezviratidzo zveLorca
Juan Munoz Martín. Yakajairika yechinyakare yezvinyorwa zvevana